Lokhu Ukwenza Iqiniso | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UFan Xing Edolobheni LaseZhumadian, Esifundazweni SaseHenan
Esikhathini esedlule, ngahlanganiswa nodade othile ukuze ngiyosebenza emisebenzini ethile. Ngenxa yokuba nokuzithwala nokuzazisa futhi angizange ngifune iqiniso, ngaba nemibono ethile enganginayo ngalo dade engayigcina njalo enhliziyweni yami futhi engingazange ngikhulume ngayo naye ngokukhululeka. Lapho sehlukana, ngangingangenile eqinisweni lokuba nobuhlobo obunokuzwana. Kamuva, ibandla lahlela ukuba ngiyosebenza nomunye udade futhi ngenza isinqumo phambi kukaNkulunkulu: Kusukela manje kuye phambili, ngeke ngihambe ezindleleni zokwehluleka. Ngifunde isifundo futhi ngalesi sikhathi ngokuqinisekile ngizokhuluma ngokuvuleka okwengeziwe nalo dade futhi ngibe nobudlelwane obunokuzwana.
Ngaso sonke isikhathi lapho kunokuxabana noma igebe phakathi kwethu njengoba sasenza imisebenzi yethu ndawonye, ngangithatha isinyathelo sokukhuluma nodade futhi ngisho okusenhliziyweni yami. Ngangimbuza ukuthi yiziphi izinto engingenzi kahle kuzo. Udade wayeveza ukuthi nganginokuzithwala nokuzazisa nokuthi ngangiyichitha njalo imibono yakhe uma sikhuluma. Wathi ngezinye izikhathi ngangiye ngikhombe izimo zakhe futhi ngimahlulele ngokungenabulungisa, nokuthi phakathi nemibuthano, ngangenza zonke izinqumo ngokufundwa kwezwi likaNkulunkulu. Ngavuma ngokunqekuzisa ikhanda kuzo zonke lezi zinto udade ayeziveza ngami. Ngacabanga: “Njengoba uthi nginokuzithwala, khona-ke ngizokhuluma ngokuthobeka okukhulu kusukela manje kuye phambili futhi nginake kakhulu ukukhuluma ngokuhlakanipha nangokuqikelela. Uma ngibona noma yiziphi izinkinga onazo ngizozibeka kalula lapho ngizisho. Uma ungaziboni, khona-ke ngeke ngikhulume ngazo. Ngesikhathi semibuthano, ngizodla futhi ngiphuze noma yini ongitshela ukuba ngiyidle futhi ngiyiphuze, futhi ngizolalela noma yini oyishoyo. Ingabe lokhu ngeke kuxazulule zonke izinkinga? Ngakho ngeke uthi angikwazi ukusebenza noma nobani ngenxa yokuzithwala kwami.” Ngemva kwalokhu, ngaqala ukukwenza lokhu. Ngaphambi kokukhuluma, ngangicabanga indlela yokugwema ukwenqaba umbono kadade. Lapho imibono yethu ingafani, ngangiba nombono ongafani naye bese ngenza ngokuvumelana nombono wakhe. Lapho ngibona udade enza kabi into ethile, ngangingamchazeli khona ngokucacile. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile sokwenza ngale ndlela, ngabona ukuthi umqondonkolelo wami “wokushiya inyama nokwenza iqiniso” awubuguqulanga nhlobo ubuhlobo bethu. Kunalokho, waqinisa imibono ayevele enayo ngami. Ngibona le miphumela, ngazizwa ngoniwe. Ngacabanga: “Ngenze okusemandleni ami ukuze ngenze iqiniso, kungani kungasebenzi? Akulula ukuzwana nalo dade, akanalo ngisho noluncane uzwela.” Ngakho, ngacwila ekubeni nesimo somqondo esiphambene futhi inhliziyo yami yaba buhlungu ngokwedlulele.
Ngolunye usuku, kwafika umholi webandla ezohlola umsebenzi wethu futhi wabuza ukuthi bezinjani izimo zethu phakathi nalesi sikhathi. Ngase ngisho lokho isimo sami esasibe yikho. Ngemva kokulalela, umholi webandla wathi: “Le ndlela enenza ngayo ayikhona ukwenza iqiniso. Anihlanzekile ngaphakathi. Nenza lokho ngenxa yenjongo yenu futhi anenzi ngokuvumelana neqiniso.” Ngemva kwalokhu, safunda iziqephu ezimbili zamazwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wathi: “Ngaphandle, kubonakala sengathi wenza iqiniso, kodwa empeleni, inhlobo yezenzo zakho ayikhombisi ukuthi wenza iqiniso. Baningi abantu abanokuziphatha okuthile kwangaphandle, abakholwa ukuthi ‘Ngenza iqiniso. Ngabe angiyifezi imisebenzi yami? Ngabe angishiyanga umndeni nomsebenzi wami? Angenzi iqiniso ngokufeza imisebenzi yami?’ Kodwa uNkulunkulu uthi: ‘Angivumi ukuthi wenza iqiniso.’ Kuyini lokhu? Lokhu kuyindlela yokuziphatha. Uma ngikhuluma iqiniso, ungalahlwa ngecala ngenxa yakho; ngeke kunconywe, ngeke kukhunjulwe. Uma ngikhuluma iqiniso ngokwengeziwe, ekuhlaziyeni lokhu, wenza ububi, ukuziphatha kwakho kuphikisa uNkulunkulu. Ngaphandle, awunqamuli, awuphazamisi, awulimazi lutho, noma wenze ngokuphambene nanoma yiliphi iqiniso. Kubonakala sengathi okwenzayo kuyezwakala futhi kunomqondo, kodwa wenza ububi futhi umelana noNkulunkulu. Ngakho kufanele ubheke emthonjeni njengoba uNkulunkulu efunile, ukuze ubone ukuthi kunokuguquka esimweni sakho noma ukuthi ulenzile iqiniso. Akuqondene nokuhambisana nemicabango nemibono yomuntu, noma nalokho okuthandwa nguwe siqu. Kodwa, nguNkulunkulu oshoyo ukuthi izenzo zakho zineqiniso nokuthi ziyafika noma azifiki ezindinganisweni Zakhe. Ukuzilinganisa ngezimfuno zikaNkulunkulu yiyona kuphela indlela elungile” (“Okufanele Ukwazi Ngokuguqula Isimo Sakho” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). “Imibono yabantu ibukeka imihle ifanelekile kubantu, ibukeka ingaliphazamisi kangako iqiniso. Abantu bathi ukwenza kanje ukwenza iqiniso, babona ukwenza kanje kungukuzinikela kuNkulunkulu. Empeleni, abantu akukhona ukuthi bafuna uNkulunkulu nokuthi bayakhuleka kuNkulunkulu ngalokhu. Abazimiseli ukwenza kahle ukuze benelise intando kaNkulunkulu, abazimiseli futhi ngokwezinhloso zaKhe. Abanaso lesi simo seqiniso, baphinde bangabi naleyo ntshisekelo. Yiphutha elikhulu leli elenziwa ngabantu ekwenzeni kwabo izinto, ngoba ungakholelwa kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akekho enhliziyweni yakho. Akusona kanjani isono lesi? Akukhona kanjani ukuzikhohlisa lokhu? Mphumela muni okuzoba nawo ukukholwa kanje? Kuphi ukubaluleka okubonakala ekukholweni nguNkulunkulu?” (“Ukufuna Intando KaNkulunkulu Kanye Nokwenza Iqiniso Ngokuqikelela Okukhulu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Ngazama ukuqonda amazwi kaNkulunkulu futhi ngawaqhathanisa nengangithi yisimo sami “sokwenza iqiniso.” Inhliziyo yami yakhanya. Ngakho, indlela engangenza ngayo izinto yayingahloselwe ukwanelisa uNkulunkulu. Yayihloselwe ukuvikela isithunzi sami sokuyize. Ngangesaba ukuthi umholi uzothi isiqu esingokomoya sami sasinamaphutha, ukuthi ngangingalifuni iqiniso, nokuthi ngangingasebenzisani kahle nabanye. Ngaphezu kwalokho, ngacabanga ukuthi kwakuyizaba zokuxegisa ubuhlobo bami nodade kanye nokusuka emahlonini nasebuhlungwini obabubangelwe ukuxabana. Ngacabanga ukuthi kuzovikela isithombe abanye abantu ababenalo ngami futhi kubenze babone ukuthi ngangiguqukile. Kwakubonakala ukuthi ukusho kwami kokuthi “ngenza iqiniso” kwakungokwezinjongo zami. Konke kwakwenziwa phambi kwabanye futhi kungasekelwe ekufuneni ukwanelisa uNkulunkulu. Angizange ngizenyanye futhi ngilahle ngobuqotho inyama ngenxa yokuthi ngangingakuboni ukuzithwala kanye nemvelo yami enokuzazisa. Lapho ngicabanga ngokusebenza nodade, kwakungenxa yokuthi ngangingakuboni ukuzithwala kanye nemvelo yami enokuzazisa, futhi kungenxa yokuthi ngangiziphakamisa nokuthi njalo ngangicabanga ukuthi ngingcono kunabanye okwenza ukuthi lapho ngikhuluma, ngokungaqondile ngangehlisa abanye. Lapho ngisingatha izindaba, ngangithanda ukuphatha; ngangenza izinto ngendlela yami, futhi ngingayibheki imibono yabanye abantu. Lapho udade eveza lezi zinkinga enganginazo, angizange ngifune iqiniso elifanele lokuhlaziya nokuqonda ingqikithi yemvelo yami. Ngaphezu kwalokho, angizange ngifune indlela yokwenza ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu ngokuvumelana neqiniso. Ngaguqula kuphela izenzo ezimbalwa zangaphandle, ngicabanga ukuthi njengoba ngiyekile ukwenza izinto ezimbi, ngangenza iqiniso. Eqinisweni, yonke into engangiyenza yayikade iyiqiniso elisekelwe emicabangweni yami. Konke kwakuyizenzo zangaphandle nezingahlangene ngalutho nezwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu wayengeke ukuvume ukuthi ngangenza iqiniso. Ngoba ngangingakwenzi ngokuvumelana nezimfuneko zikaNkulunkulu nokuthi ngingakwenzi ngokuvumelana neqiniso, futhi yonke into engangiyenza yayenzelwe ukwanelisa izifiso zami siqu kanye nokufinyelela ezinhlosweni zami siqu, ngakho-ke izenzo zami zazizimbi emehlweni kaNkulunkulu; zazimelene noNkulunkulu.
Ngemva kokuqaphela lokhu, ngobuqotho ngahlanganisa izwi likaNkulunkulu nokuqonda imvelo yami enokukhohlakala ekuphileni. Lapho ngiveza ukukhohlakala kwami noma ngiqaphela ukuthi isimo sami asilungile, ngembula ngokusobala ukuma kwami futhi ngakuhlaziya ngase ngibuka umsuka ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Lapho ngenza lokhu, inkulumo nezenzo zami kwazotha ngokwemvelo, futhi ngazi ukuma okufanele ngikuthathe. Ngaba nokuhlonipha abantu futhi ngazithoba ngesineke. Ukushiya inyama akubange kusaba yinto elukhuni futhi saba nengxoxo yokuthululelana izifuba. Ubudlelwane bethu base bube nokuzwana okukhulu kakhulu kunangesikhathi esedlule.
Ngalokhu okuhlangenwe nakho, ngiqonde ukuthi ukwenza iqiniso kufanele kusekelwe ezwini likaNkulunkulu futhi kufanele kwenziwe ngokwezimiso zeqiniso. Uma umuntu eshiya izwi likaNkulunkulu, khona-ke yonke into iba yisenzo sangaphandle, okuwukuthi, ukwenza iqiniso ngokwemicabango yakhe. Ngisho noma ngangenza izinto kahle nangendlela efanele, kwakungeke kuthathwe ngokuthi ukwenza iqiniso, futhi ikakhulu kwakungeke kulethe uguquko esimweni sami sokuphila. Kusukela manje kuye phambili, kungakhathaleki ukuthi ngenzani, ngifuna amazwi kaNkulunkulu ukuthi abe yizimiso zezenzo zami futhi ngenze ngokugcwele izwi likaNkulunkulu ukuze ukuziphatha kwami kuzovumelana neqiniso kanye nentando kaNkulunkulu futhi ngithole ukwanelisa uNkulunkulu.
UWenwen Edolobheni LaseChangchun, Esifundazweni SaseJilin Ngokombono wami, njalo ngangicabanga ukuthi uma ukwenza izinto kwangaphandle kusabonakala ku…